Maayirka la rajaynayo inuu Hargeisa hogaanka u qabto todobaada inagu soo foolka leh. Mr. Abdikarem Ahmed Mooge horta waan u ducaynaynaa in illaahay ku asturo xilka umadeed iyo masuuliyadda bulsho. | CeelGardi News
Home Articles Maayirka la rajaynayo inuu Hargeisa hogaanka u qabto todobaada inagu soo foolka...
Maayirka la rajaynayo inuu Hargeisa hogaanka u qabto todobaada inagu soo foolka leh. Mr. Abdikarem Ahmed Mooge horta waan u ducaynaynaa in illaahay ku asturo xilka umadeed iyo masuuliyadda bulsho.
Waxaan dhagaystay mar wax laga weydiiyey barnaamijkiisa casriyanta Hargeisa. Wuxuu awooda saaray yaraynta qashinka wuxuuna ku soo koobay talaabyin dhawra inuu qaadayo oo ah sidan:
1. Inuu samaynayo olole joogtaa oo lagu yaraynayo qashinka isla markaana lagu dhisayo garaadka bulshadda ee kor uqaadida nadaafadda iyo yaraynta qashinka.
2. Inuu dejinayo siyaasadda dib u sancaynta caaqadaha biyaha laga cabo ( Recycling Policy)
3. Nidaaminta goobaha qaadka lagu iibiyo oo loo samayndoono goobo u gaara.
4. Inuu abuuri doono agabka iyo goobaha qashinka fuduud ee wadooyinka hareerihiisa. Iyo in dadka lagu wacyigaliyo inay la qabsadan oo ay haddii aanay marin habraaca loo sameeyey ay mudan doonaan ganaaxayo.
5. Dayactirka wadooyinka dhisan iyo kor u qaadida tayadda kuwa la dhisidoono
Haddaba haddii intan Hargeisa laga qabto waxaa wax wayn iska bedeli doonaa sida maanta Hargeysi tahay.
Mihiimaduna intani si fuduud uma imanayso ama mudo kooban kuma dhacayso ee waxay u baahanaysaa
– Qorshe Fulineed (Implementation Strategy Plan)
Ha filan in arinkani si fuduud iskaga dhacayso bil ama sanad gudahood ee talaabyinkani waxay qaadan doonaan mudo.
Markaa waa inaanay bulshadda reer hargeisa la yimaadaan simir iyo inay lashaqeeyaan masuuliyiinta la doortay.
F.G. Waxaa iman doona caqabado faro badan oo arrimahan kahor u baahan xalin oo ay ka midtahay dib u qaabaynta shaqadda dawladda hoose. Waxaa dhici karta in shaqaalaha laftigoodu arrimahan ay cadaw ku noqdaan waayo sodon sano oo qaab la’aana ayey la qabsadeen.
Barkhad Jaamac Batuun Hassan Gallaydh Ahmed Saed Hassan Garyaqaan Jamaal Hussein Mandeela Wariye Mubarik Nirig Wariye Bishaaro Bade Jamac Wariye Safaah Xasan Wariye Sucaad Jamac Qalinle Bushaaro Baanday Hassan Garnayl
Qore: Ahmed Guuto
Previous articleMarwo Hinda xirsi jaamac oo sheegtay sababihii xisbiga kulmiye looga adkaaday dorashooyinki
Next articleDaawo . Beeshay cunsiyadii ay qabtay way ka baxsay